Qaqa amandla akho aphelele okwenza izinto.
Funda ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-Dianetics ngalevidiyo!
Incwadi namuhla ingunombolo 1 yokuzisiza edayisa kahle kakhulu ngenxa yesizathu esisodwa, IYASEBENZA. Manje, nansi ividio ekukhombisa ukuthi iyini i-Dianetics, ukuthi isebenza kanjani kanye nokuthi ngempela ungayenza kanjani ulandela imigomo efanele.
Ngalevidiyo, ungafunda ukuthi ungawasebenzisa kanjani amasu asobala aqukethwe encwadini ka-L. Ron Hubbard ukubona izivimbelo kanye nemigoqo yamandla akho agcwele okwenza izinto - bese ubhekana nazo!
I-Dianetics iqukethe namuhla isayensi esebenza kahla kakhulu futhi esetshenziswa ngokubanzi yomqondo. Yembula (ngamagama acace kunoma ubani) umthombo owodwa wokukhathazeka, isimo esishubile, ukucindezeleka ngokwenqondo, ukugula kwenqondo, ukucindezeleka, ukuhuheka kanye nokusangana - umqondo osabelayo (the reactive mind).
Le vidiyo ikukhombisa ukuthi kweseshini yoku-oditha yedianetics ibukeka kanjani ukuze uqale ukusebenzisa lobuchwephesha USUSE umqondo osabelayo (reactive mind).
Isuselwa ebuchwephesheni obuvela encwadini edayisa kahle kakhulu ka-L. Ron Hubbard, le vidiyo ikunikeza umnyombo wemigomo ekhuthazayo ye-Dianetics into the - imigomo ezoshintsha kuze kube phakade indlela obuka ngayo inqondo yakho, amandla okwenza izinto kwakho kanye nempilo yakho.
Buka loluhlelo, hlala phansi nomngano wakho bese uyakwenza! Sebenzisa le vidiyo ukususa imbangela eyodwa yokuhluphela komuntu bese uvula umnyango oya emandleni akho agcwele okukwazi ukwenzato izinto!